नेवारहरुले निर्मम कुटाई खाएको देखे पछि - झीगु डट कम
इतिहास कथा काठमाडौं संस्कृति नेपाली
प्रस्तुति इन्द्र भट्ट
गुठि बिधेयकको बिरुद्धमा आवाज उठाउँदा निहत्था नेवारहरुले निर्मम कुटाई खाएको देखे पछि हाम्रो बाजेले एउटा इतिहाँस भन्नु भयो :
काठमाडौं राज्य माथि मध्यरातमा जात्राको समयमा आक्रमण गरे पछी नेवारमा हाहाकार मच्चियो, निष्पट्ट अँध्यारो भित्र रुवाबासी भयो । यो अवस्था देखे पछि बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाह अगाडि आएर भन्नु भयो : “अब तिमीहरुको सुरक्षा गोर्खाले सेनाले गर्नेछ, बिना डर त्रास आफ्नो जात्रा यथावत चलाउनु ।” कोलाहल-हाहाकार शान्त भयो, ढुक्क साथ जात्रा अगाडि बढ्यो ।
बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको सन्तान दरसन्तानले पनि नेवारको सम्पूर्ण संस्कृति ज्युँको त्यूँ राखे । कुमारी प्रथा, गाई जात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, मछिन्द्रनाथको जात्रा बिस्केट जात्रादेखि अनेक परम्परा राजसँस्थाले संरक्षण गर्यो । नेवार आफ्नै परम्परामा रमाई रहे ।
राजा र राजसँस्था रहँदा सम्म राजदरबारको सचिवदेखि अन्य कर्मचारी सुसारे बगैचे समेत नेवार नै थिए । उपत्यकामा नेवार धनी थिए, आफ्नै खेतको अन्नपातले खान पुग्थ्यो । प्रशस्त जग्गाजमिन थियो, उपत्यका भर हरियाली खेत थियो, पहेंलपुर लहलह धानको बाला झुल्दथे । जताततै यिनैको खेत थियो । उपत्यकाको अधिकांश सरकारी देखि प्राइभेट रोजगारमा ठुला साना ओहदामा नेवार नै थिए । पश्चिमा क्रिश्चियनले लगानी गरेर पालेका यिनै नेवारका ज्वाईं बाहुनहरु यिनको सत्रु भएर निस्के । राजा फाल्न पर्छ भनेर यिनका ज्वाईंले यिनलाई उचाले । “राजतन्त्र – मुर्दाबाद” गर्दै नेवारले काठमाडौँ सडक कब्जा गरे अनेक तामझाम गरेर राजा, राजसँस्था फाले ।
राजा र राजसँस्था सँगै आज नेवारको सम्पत्ति खेत जग्गा जमिन पनि गयो, २/४ लाख प्रति आनामा बिक्रि गरे । नेवारको घर ओरिपरी घरैघर बने यिनको कोठामा आज घाम मात्रै होइन हावा समेत छिर्दैन । यिनका खेतमा पुरै घरैघर छन । आज यिनको गुठिमा धावा बोलियो । आज यिनीसँग सम्पत्ति त छैन नै भोलि यिनको संस्कृति पनि नहुने पक्का छ । यिनले पुजा गर्ने देउताको थान बिस्थापित हुने क्रम बढ्दो र यिनको घर ओरिपरी गल्लि-गल्लीमा चर्च ठडिने क्रम बढ्दो छ यति हुँदा पनि यिनले चाल पाएका छैनन् । किन रुन्छ्स मङ्गले आफनै ढङ्गले…….)
म बाजेको भनाई प्रति पुरै सहमत भएँ ।
लेखककाे झी नेवाः फेसबुक ग्रुपमा राखिएकाे पोस्टबाट
← दिए मागौं, नदिए खोसौं (कविता) !
गुठी विधेयक किन जनविरोधी र देशघाती छ ? →
August 6, 2019 झीगु डट कम 0